Daawo Muuqaal: Koox Dhalinyarro Russian ah oo soo hindisay qaab cusub ee loo dabaalan karo. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Dhacdooyinka » Daawo Muuqaal: Koox Dhalinyarro Russian ah oo soo hindisay qaab cusub ee loo dabaalan karo.
Daawo Muuqaal: Koox Dhalinyarro Russian ah oo soo hindisay qaab cusub ee loo dabaalan karo.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 20-07-16 1:24 PM Koox dhalin yarro oo kamid ah dhalinyaradda kasoo jeeda dalka Russia ayaa maalin maalmahan kamid ah go’aansaday iney u dabaal tagaan wabi leh biyo diiran ee ku yaala isla dalkaas Russia.
Balse dhalinyaradan marka ay soo gaareen wabigii ayey la yimaadeen fikrad cusub oo caalamka oo idil ka fajacisay sida lagu daabacay website ka lagu qoro maqaalada ugu yaabka badan caalamka.
Si aad u sameysid waxa ay sameeyeen dhalinyaraddan ayaa ah inaad gaarigaaga dabadda u gelisid biyaha adiga oo afkiisa horena dhigayo banaanka balliga ama biyo fadhiisid ka aad dooneysid inaad ku dabaalatid.
Kadibna waxaad si fudud ugu soo taraarixi kartaa dhanka sarre ee gaariga adiga oo kasoo bilaabaya ama kasoo fuulayo gaariga wejiga hore kuna soo soconayo saqafka kore ee gaarigga.
Muuqaalkan hoose ka daawo Dariiqadan la yaabka leh ay sameeyeen dhalinyaraddan Russian ka ah.